Soomaali lagu qabtay Uganda oo lagu tuhunsanyahay argagixisnimo – Radio Daljir
Soomaali lagu qabtay Uganda oo lagu tuhunsanyahay argagixisnimo
Kampala, 16 May- Ciidamada ammaanka ee dalka Uganda ayaa xidhay oo su?aalo waydiinaya afar qof oo Soomaali ah oo shalay galinkii dambe ay ka qabteen tuulo u dhow soohdinta dalkaasi uu la wadaago Koonfurta Suudaan.
Afartan nin ee Soomaalida ah ayaa looga shakisanyahay ku luglahaanshaha kooxo argagixiso ayaa kaddib markii la qabtay iyagoon sidan dal ku gal, sidoo kale aan wadan baasaboorro.
Sarkaal u hadlay ciidamada ammaanka ee Uganda oo la yidhaahdo Alex Wabire ayaa sheegey in raggan Soomaalida ah laga qabtay bar kaantarool oo la yidhaahdo Packwach, taasoo ku taalla tuulada oo u dhow soohdinta dalkaasi uu la laayahay waddanka Koonfurta Suudaan, sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegey in raggani ay ka soo tallaabeen gobolka Jubba ee Koonfurta Suudaan.
Saraakiisha ammaanka ee Uganda ayaa sheegey in ay eedeysanayaashan su?aalo waydiinayaan ku saabsan ulajeedada socdaalkooda aan sharciga ahayn, isla markaana baadhintaan lagu hayo.
Agaasime xigeenka la dagaallanka argagixisada ee Uganda John Ndungutse ayaa sheegey in raggan Soomaalida ah ee la hayo lagu tuhunsanyahay in ay xidhiidh la leeyihiin ururka Alshabaab, isla markaana ay damacsanaayeen in ay dalka Uganda ka gaystaan falal argagixiso, sida uu hadalka u dhigay, baadhitaanno dheeraad ah ayaana uu sheegey in eedeysanayaashan la marin doono.
Uganda ayaa si heer sare ah uga feejigan weeraro uga yimaadda Alshabaab. Waxaa xusid mudan in weerar dad badan lagu laayay oo ka dhacay goob lagu daawanayay ciyaaraha adduunka ee sannadkii hore ay Alshabaab sheegteen.
Dhawaanna waxay Alshabaab sheegeen in ay qaadi doonaan weeraro ay ugu aargudayaan dilkii hoggaamiyihii Alqaacidda Usaama Bin Laadin.